आइतबारदेखि उपत्यकामा गाडी चलाउन ‘टाइम कार्ड’ - Pahilo Click
आइतबारदेखि उपत्यकामा गाडी चलाउन ‘टाइम कार्ड’
May 9, 2020 |Pahiloclick
काठमाडौं: आइतबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चलाउन ‘टाइम कार्ड’ लागू हुने भएको छ ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरीलगायतका सरोकारवाला निकायहरूबीच भएको छलफलले सवारी सञ्चालनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । अब तोकेको समयमा मात्र चलाउन पाउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म कार्यालय जान र बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म घर फर्कने समय तोकिएको छ ।
यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म गइसक्नुपर्ने र बेलुका साढे ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म फर्कनु पर्नेछ । ‘एक तिहाइ मात्र कर्मचारी जाने भनिएको छ । त्यसैले दिउँसोको समयमा सामान्यतया आवत जावत नगरौं भनेर समय तोकिएको हो’ ढकालले भने।
त्यस्तै, खाद्यान्न, तरकारी तथा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिहान १० बजेभित्र ढुवानी गरिसक्नुपर्नेछ । निमाण सामग्री बोकेका ठूला सवारीलाई बेलुका ८ बजेपछि मात्र बिहान ६ बजेसम्म उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
औषधि र खानेपानीको सवारी साधानको हकमा भने टाइम कार्ड लागू हुने छैन ।
द्रुतमार्गका लागि पनि घट्यो बजेट, सेनाले पायो जम्मा ८ अर्व ९३ करोड
काठमाडौँ: यसपाली काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुत मार्ग निर्माणका लागि सरकारल आगामी आवका लागि...
आव २०७७/७८ को बजेटको पूर्णपाठ पढ्नुहोस
काठमाडौँ: सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७९ को बजेट विनियोजन गरिसकेको...
बजेट बक्तब्य: सरकारको खाजा, बैठक भत्ता लगायत अन्य भैपरी आउने खर्चमा ब्यापक कटौती
काठमाडौँ: सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले...
बजेटको आकार घट्यो, आगामी आवको लागि कुल १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत
काठमाडौं: सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय...
भारतीय विदेश सचिव गोखलेको नेपाल भ्रमणको भित्रि पाटो के हो?
अव १२ पढेकालाई मात्रै नो-अब्जेक्सन लेटर, एक वर्षकमका पढाइलाई नदिइने
कर्णाली राजमार्गमा पहिरो, यातायात ठप्प
काठमाडौँका पेशेवर डाँका ‘कट्टु’ ११ वर्षपछी पक्राउ
द्रूतमार्गको डिपिआरको काम शुरु
मन्त्री हेरफेर छिटै, कम्तीमा ६ जना मन्त्री फेरिने